Real Madrid oo si weyn u dooneysa inay dib ula soo saxiixato Cristiano Ronaldo – GOBOLADA.COM
Real Madrid oo si weyn u dooneysa inay dib ula soo saxiixato Cristiano Ronaldo
May 3, 2022 May 3, 2022 gobolada_yqp3koLeave a Comment on Real Madrid oo si weyn u dooneysa inay dib ula soo saxiixato Cristiano Ronaldo
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa si weyn u dooneysa inay dib ula soo wareegto Cristiano Ronaldo kaasoo haatan ka tirsan naadiga Manchester United isla markaana bandhig heer sare ah ka sameynaya horyaalka Premier League.
Ronaldo ayaa xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya inkastoo ay kooxda Man United liidato fasalkan, waxaana uu Red Devils u dhaliyay 23 gool kaddib 37 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan 2021-22.
Wargeyska The Mirror ayaa sheegay inay Madrid la dhacsan tahay shaqada wanaagsan ee uu qabanayo xiddigeedii hore taasoo horseed u noqotay inay damacdo dib ula soo saxiixashadiisa.
Wargeyska ayaa intaas ku daray inay Los Blancos quus ka taagan tahay lasoo saxiixashada laacibka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe kaasoo la fahansan yahay inay kooxdiisa ku qancisay inuu lasii joogo, waxayna sidaas darteed, kooxda reer Spain dareenkeeda u weeciyay kabtanka Portugal oo qiimo hoose lagu heli karo.
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ayaa sagaal sano ku qaatay naadiga Real Madrid intii u dhexeysay 2009 illaa 2018 isagoo muddadaas noqday gool-dhaliyaha ugu sarreeya taariikhdeeda, waxaana haatan la aaminsan yahay inay markale kala soo saxiixan karto isla Manchester United taasoo xagaagan ku iibin karta 10 milyan oo gini maadaama uu qandaraaskiisu dhici doono xagaaga dambe.
Pep Guardiola oo aqbalay inuu heshiis cusub u saxiixo Manchester City & Ciyaaryahanka ku qasbay oo la ogaaday